အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေဟာ Ro အဆန်ဆုံးတွေကိုမှ ရိုက်ကူးပြသနိုင်တာကတော့ ချိုင်းနားတွေပါပဲ။ စိတ်ကူးယဉ်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကို ကြည့်ရှုသူတွေကိုယ်တိုင် တကယ်ခံစားမိအောင် ရိုက်ကူးနိုင်တာကြောင့် ထွက်သမျှတိုင်းကို ပရိသတ်တွေက လက်မလွှတ်တမ်း စောင့်ကြည့်ကြပါတော့တယ်။
လာမယ့် ‌နိုဝင်ဘာလမှာတော့ အရပ်ရှည်ရှည်ကောင်လေးနဲ့ အရပ်ပုပုကောင်မလေးကြားက Ro ဆန်ဆန်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးက ထွက်လာတော့မှာပါ။ မင်းသားချော Hu Yitian နဲ့အတူ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မင်းသမီးလေး Xing Fei တို့က “Hello, The Sharpshooter” ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာ စုံတွဲတွေအဖြစ် ပါဝင်ရိုက်ကူးထားကြပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အတိတ်က ထူးချွန်ပေမဲ့လည်း စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို ရင်ဝယ်ပိုက်ထားတဲ့ တာဝေးပစ် လက်ဖြောင့်သမားတစ်ဦးနဲ့ သူ့ကိုမှ ကျိတ်ကြွေနေတဲ့ အားကစားသတင်းထောက်မလေးကြား အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ နိုင်ငံတကာ အားကစားပြိုင်ပွဲမှာ Tang Xin ( Xing Fei) က မီတာ ၅၀ ပစ်စတိုသေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ အနိုင်ရသူကို အင်တာဗျူးဖို့ တာဝန်ပေးခံရပါတယ်။
ကံကြမ္မာရဲ့ တွေ့ဆုံပေးမှုအရ သူမ အင်တာဗျူးရမယ့် ချန်ပီယံဟာ လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်က သူမကျိတ်ကြွေနေခဲ့ရတဲ့ Shen Qingyuan ( Hu Yitian ) ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ Shen Qingyuan ကို အင်တာဗျူးတော့ အေးစက်မာကျောတဲ့ပုံစံနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ဖြေသမျှကလည်း တုံးတိတိ ဂွကျကျတွေဖြစ်တာကြောင့် Tang Xin ဟာ အလုပ်ပြုတ်လုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့ရရှာပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ပြဿအရင်းအမြစ်ကိုဖြေရှင်းဖို့ Tang Xin တစ်ယောက် Qingyuan နား မခွာတမ်းကပ်နေရဖို့ ကြံစည်းတော့တာပါပဲ။ အဝေးပစ်အဖွဲ့ထဲမှာ မျိုးစုံသော ပြိုင်ပွဲဝင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံရလာပြီး မတူညီတဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေကို သိရှိလာရပါတော့တယ်။ သူမ, ချစ်ရသူ သေနတ်ပစ်သမားလေးရဲ့ အတိတ်က စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ Tang Xin ဟာ ကူညီနှစ်သိမ့်ဖို့ ကြံဆောင်ပါတော့တယ်။
အေးစက်မာကြောသွားရဲ့အထိ ဖြစ်သွားရလောက်အောင် Qingyuan ခံစားခဲ့ရတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာဟာ ဘာလဲ? သူမချစ်ရသူကို အကုန်လုံးအဆင်ပြေချောမွေ့သွားဖို့ တစ်ဖက်သတ် ဘယ်လိုတွေကုစား​ဖေးမပေးမလဲ? သူမရဲ့ မေတ္တာတွေကြောင့် ချန်ပီယံကောင်လေးတစ်ယောက် ပြောင်းလဲသွားမလား? စတဲ့ ဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်း လူငယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။
Ro ဆန်တာကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူလေးတွေ၊ ကောင်လေးတွေရဲ့ နားလည်ရခက်တဲ့အပြုအမူတွေ၊ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့စိတ်ကို ဘယ်လိုမျိုးဖေးမစောင့်ရှောက်သွားသင့်သလဲဆိုတာကို လေ့လာချင်တဲ့ ကောင်မလေးတွေအတွက် ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါပဲ။ နိုဝင်ဘာလထဲထွက်လာမှာမို့လို့ အတူတူကြည့်ကြဖို့ သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
Next ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ သူမရဲ့ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကို အပွင့်လင်းဆုံးမျှဝေခဲ့သူ Jennie »
Previous « လူမည်းတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာ တောင်းပန်ခဲ့ရတဲ့ Aespa အဖွဲ့ဝင် Giselle